Indlela yokudibanisa idizayini yewebhu kunye ne-Search Engine Optimization?
Ngokuqhelekileyo, xa usungula isakhelo esitsha malunga nokuba kukho nawuphi na umsebenzi we-intanethi, isabelo seengonyama siqwalaselwa kwi-website kunye ne-Search Engine Optimization (SEO). Masijamelane nayo - ukuba nombono okhangayo, onobungcali kunye nobungcali bebhanki yimiba ephambili xa kufikelele ekuboneleleni ngokulula nokufumana izivakashi. Kodwa kuthekani ukuba ndithi yonke le mi sebenzi enzima kwi-design website ingaba yinkangala emva kwayo yonke into? Kuthekani ukuba abasebenzisi be-intanethi abayi kuze babone i-website eboniswe kwiluhlu oluphezulu lwe-SERP yi-Google? Yingakho ngaphantsi ndiza kuxoxisana nokubaluleka okubalulekileyo kokusebenza ngokubambisana kakhulu kwimisebenzi yakho kwiwebhusayithi ye-Intanethi kunye ne-Search Engine Optimization - summer knee length dresses.
Yonke into eyenziwa yinkqubo yokukhangela injini yokukhangela iqala ngokubeka yonke into ekubonwayo ngayo ngokuhambelana ne-algorithms yokukhangela. Ndiyathetha i-tag ye-altare yomfanekiso ngamnye owubeka kumaphepha akho ewebhu. Into yokuba ezininzi zeenjini zokukhangela (kunye ne-Google ngokwayo) azikwazi "ukufunda" umxholo obonakalayo ngaphandle kokuba yonke imifanekiso ifakwe ingcaciso ebalulekileyo ngokubhaliweyo. Ngaphezu koko, ukuba iwebhusayithi yakho igqitywe ngemifanekiso emikhulu iya kunciphisa isantya sakho sokulayisha, ngoko ke senza okubi kwizinga eliphezulu kwiSERPs. Yingakho kubaluleke kakhulu ukunciphisa umxholo wakho wokubukela xa ukhumbula izikhokelo ze-SEO ezikhokelayo xa ukhetha amagama emifanekiso, kwaye ubandakanyeke ngamagama angundoqo amagama akho maklayenti angakhokelela ukuba afake kumbuzo wokukhangela.
Ukuqulunqwa kwewebsite ekuxhaseni kukuphucula ukuSebenza kweeNjini zoKhenketho
Namhlanje, iifowuni eziphathekayo zisetyenziselwa ukuphequlula i-intanethi ngokuphindaphindiweyo kwaye rhoqo. Ukuqwalasela ukuba inani elinyukayo labathengi banokukhangela iimveliso okanye iinkonzo abayidingayo nge-smartphones kunye namacwecwe, ukukhwa kwe-intanethi ye-intanethi ngoku kunikezelwa ngezinga eliphezulu kwi-SERPs. Ngoko ke, i-Google iqalile ukuqalisa i-penalizing loo mawebhusayithi esebenza ngaphandle kokusetyenzwa kwemisebenzi echanekileyo yokufumana i-browsing best experience ngokusebenzisa iifowuni eziphathekayo. Yingakho kungengcamango efanelekileyo ukugcina isakhiwo sakho sewebhusayithi esilondolozayo ukugcina i-Search Engine Optimization isebenza ngexesha elifanayo. Ukwenza ngale ndlela, ungalibali ukuqinisekisa ukuba umxholo wakho uphinde uphendule kwizicelo zezwi. Ngaphandle koko, kucetyiswa yiingcali ukuba zibe neecandelo le-FAQ elungiselelwe kakuhle elifakwe kuwo wonke iphepha lakho lewebhu. Khumbula, ezo nkonzo sele sele ziFANELE ukuhlangabezana neemfuno zezinto ezikhoyo ezisisiseko esisekelwe kumbuzo wokucinga ngegama.
Yenza umsebenzi kwii-URLs .
Ndiyathetha ukuba kufuneka uhlawule ngokuthe ngqo xa ukhetha igama lesizinda. Njengoko sele ufumene enye, ucebise ukuba ufake isicelo segama le-Google-friendly for every page of website yakho. I-URL nganye kunye nephepha lephepha liphinde liphinde libhekiselele ekuthwaleni inkcazo efanelekileyo elinezityebi kunye namagama. Ukwenza njalo, uya kufezekisa ukuphuculwa komsebenzisi okwenziwe kakuhle kwi-design yakho yewebhusayithi, kunye ne-Search Engine Optimization enokubhenkcelela ukubhekiselele ngokubhetele kwi-bots.